पार्टीलाई बलियो बनाई मुलुक हाँक्न सक्ने नेतृत्वको जरुरी - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ राजनीति ∕ पार्टीलाई बलियो बनाई मुलुक हाँक्न सक्ने नेतृत्वको जरुरी
Sindhu Khabar बिहीबार, २०७८ असार २४ / १५:३९
नेपाली कांग्रेस, सिन्धुपाल्चोक
अहिले नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको सन्दर्भलाई लिएर मुलुक तातेको छ । कांग्रेस लोकतान्त्रिक ठूलो शक्ति भएकाले अबको नेपाली कांग्रेस कस्तो होला ? कुन धारबाट अगाडि बढ्ला ? अनि नेतृत्व कस्तो आउला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ । त्यसैले पनि यो महाधिवेशन, नेता कार्यकर्ता भित्र मात्रै नई नेपालमा रहेका सबै दलहरुका नेताहरुको नजरमा पनि छ ।
नेपाली कांग्रेस नेपालको यस्तो महत्वपूर्ण दल हो जसले उठाएका विचार, सिद्धान्त अनि राजनीतिक सोचले राष्टिय राजनीतिमा गहिरो प्रभाव राख्छ । अहिले कांग्रेस सरकारमा छैन । चुनावी तालमेलमा समग्र रुपमा हार भएकै कारण कांग्रेस बाहिरिएको हो । यो अवस्था यो हारलाई कांग्रेसका समर्थक तथा कार्यकर्ताले सामान्य रुपमा पक्कै लिएका छैनन् । सुभेच्छुकहरुमा त्यतिबेलाको परिणामले निराशा पैदा गराएको थियो । आत्मसम्मानमा ठोस पुगेकै हो । अब फेरि यस्तो अवस्था आउन नदिन नेतृत्व चयनमाथि महाधिवेशन सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ ।
अबको महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्ने विषयलाई आन्तरिक विभाजन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको होडबाजी छ । महाई लाग्छ हामी यसमा लाग्ननुहुँदैन । तर पनि यो लोकतान्त्रिक अभ्यास भएकाले एक ढिक्का भएर कांग्रेस अबको महाधिवेशनमा जान सक्ने सम्भावना मैले देखेको छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गुट उपगुट हुन्छ । यो अन्त्य हुन सक्दैन । पहिलेदेखि नै आन्तरिक विभाजन हुन थालेका कारण अहिले पनि यो बहस चर्चामा रहेको हो ।
सभापतिका लागि योग्य नेताहरु कांग्रेसमा धेरै हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि आकांक्षी धेरै देखिएको हो । अहिलेको सन्दर्भमा भन्नैपर्दा फेरि पनि नेतृत्वका लागि गुटको खेल हुन्छ नै । आकांक्षी हुनु, उम्मेद्वार हुनु अनि कुनै एक व्यक्ति चुनिएर नेतृत्वमा जानु महाधिवेशनको सामान्य पक्ष हो । नेतृत्वमा जो गए पनि पार्टीको हितका लागि उपयोग गर्नसक्ने हुनुपर्छ ।
अब के हुन्छ भने यो महाधिवेनमा जुन विचार समूह बलियो छ । संख्यात्मक रु गुणात्मक रुपमा ठूलो छ उसैको समूहले नेतृत्व गर्ने हो । अरुले सघाउने हो । र पनि प्रतिस्पर्धी भावनाभन्दा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास र मर्यादाको राजनीतिमा हामी रहनुपर्दछ । पार्टी हाम्रो हो भन्ने सबैले मनन गर्नुपर्छ ।
पार्टी नेतृत्वका लागि आकांक्षी, या पार्टीभित्रका अग्रपंक्तिको नेताको लहैलहैमा, नेताको सम्पन्नतामा नभई देश निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने, पार्टीलाई बलियो, मजबुद बनाई सिंगो मुलुक हाँक्न सक्ने नेतृत्व अत्यावश्यक छ । राष्ट्र र जनताको सम्पन्नतामा तथा समृद्धिमा रमाउने नेताको खाँचो अहिले महसूस भएको अवस्थामा अनुभवी, पार्टीलाई चिनेको बुझेको व्यक्ति अहिलेको कार्यकर्ताले चाहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस बलियो भएर उभिन जनता र कार्यकर्ताले सबैभन्दा बढी रुचाइएका सक्षम, कुशल नेतृत्वको भूमिका बहन गर्नसक्ने सक्षम व्यक्तित्व अग्रपंक्तिमा आई लोकतान्त्रिक पुरानो दलको सान्दर्भिकता बढाउन सक्ने र कांग्रेसको भविष्य सुरक्षित गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो देखिन्छ । जसले मुलुक हाँक्नसक्नुपर्छ । जसले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । जसले पार्टी अनि मुलुकको विकास, समृद्धिको असल मार्गचित्र कोरेर भूमिका बहन गर्नसक्छ । उही हुनुपर्छ अबको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वकर्ता ।
तत्काल पद त्याग गर्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई एमालेको दवाव